Ngwaọrụ Edemede Ọdịnaya 10 maka Marketingtụnanya Marketing | Martech Zone
Ngwaọrụ Edemede 10 dị egwu maka ịtụnanya ahịa
Wenezdee, Machị 13, 2019 Bọchị Sọnde, Machị 7, 2021 Joe McLean
O siri ike ịchọta okwu ziri ezi iji kọwaa ike na omnipresence nke ọdịnaya ọdịnaya. Onye ọ bụla chọrọ ọdịnaya dị mma ụbọchị ndị a - site na ndị na-ede blọgụ amateur na ụlọ ọrụ mba ụwa na-anwa ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ha.
Dabere na akụkọ ahụ, ụlọ ọrụ ndị blog na-enweta 97% njikọ ndị ọzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha karịa ndị ibe ha na-abụghị ịde blọgụ. Nnyocha ọzọ na-ekpughe na igosipụta blog dị ka akụkụ bụ isi nke weebụsaịtị gị ga-enye gị ohere ka mma ịbụ 434% họọrọ nke ukwuu na engines ọchụchọ.
Mana iji bụrụ onye edemede na-aga nke ọma, ịkwesịrị iji ọnọdụ nke ngwa nka na plugins. Ndị na-enyere aka na dijitalụ nwere ike inyere gị aka imeziwanye ederede gị, yabụ gaa n'ihu na-agụ iji lelee 10 ederede ederede ọdịnaya maka ahịa dị ịtụnanya.
1. Blog Isiokwu Generator
Chọta echiche ohuru dị mfe anaghị adị mfe ma ọ bụrụ na ịnwere ibipụta akwụkwọ kwa izu ma ọ bụ ọbụlagodi kwa ụbọchị. Ya kpatara Hubspot mepee Blog Topic Generator iji nyere ndị edemede aka ịchọta isiokwu zuru oke maka saịtị ha. Usoro a di mfe: tinye okwu na ngwa oru gha egosi gi otutu echiche.
Iji maa atụ, anyị banyere marketing ma nata aro ndi a:
Ahịa: Atụmanya na Eziokwu
Ahịa ahịa ọ ga-achị ụwa?
Ihe ọzọ dị mkpa n'ịzụ ahịa
Akọware ihe na-erughị mkpụrụ edemede 140
Hubspot Blog Isiokwu Generator FATJOE Blog Okwu Generator
2. Ngwá Ọrụ Isiokwu
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ etu ihe si arụ ọrụ na mpụga atụmatụ Google, anyị na - akwado ka ị nwalee ngwa ọrụ Keyword a. Ikpo okwu a nwere ike iweputa ihe karịrị narị asaa ntụnye okwu maka ogologo okwu ọchụchọ ọ bụla.
Ngwaọrụ a anaghị arịọ gị ka ịmepụta akaụntụ pụrụ iche, yabụ ị nwere ike iji ya zuru oke n'efu ọtụtụ oge ịchọrọ. Ihe ị nwere ike ịtụ anya site na Keyword Tool bụ ịchọpụta ngwa ngwa ọchụchọ Google ma chọta isiokwu ndị dabara na mkpa nke ndị na-ege gị ntị.
Ngwá Ọrụ Ngwaahịa
Nke a na-abịa otu n'ime ọkacha mmasị onwe anyị, Coffitivity. Ezubere ikpo okwu a maka gị mmụọ niile nwere onwe ya n'ebe ahụ na-enwe ọ workingụ na-arụ ọrụ n'ọfịs mana enweghị ike ị nweta ya. Coffitivity na-emegharị ụda ikuku nke cafe iji bulie ihe okike gị ma nyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma.
Ọ na-enye ọtụtụ ụda olu, site na ụtụtụ ụtụtụ na Café de Paris ruo oge nri ehihie na Brazil bistros. Coffitivity na-enye gị a mmetụta nke na-arụ ọrụ a mma na zuo ike si ikuku, nke bụ a ezi n'ike mmụọ nsọ booster n'ihi na ọtụtụ ndị so dee.
4. Nọgide Na-elekwasị Anya
Igbu oge na-egbu arụpụtaghị ihe, mana enwere ụzọ iji mesoo nsogbu a, kwa. Nọgide Na-elekwasị Anya na-eme ka arụpụta ọrụ gị dịkwuo oke site na ịbelata oge ị ga-eji na-egbu oge na ebe nrụọrụ weebụ. Olee otu o si aru oru?
Ihe mgbakwunye ahụ na-etinye oge ị na-etinye n'ịntanetị ma na-egbochi atụmatụ niile ozugbo ejirila oge enyere. Ọ na-eme ka ndị na-egbu oge tinye uche n'ọrụ ha ma nyere ha aka ịrụzu ọrụ na ebumnuche ha kwa ụbọchị. Anyị na-ekele ndị ọrụ ibe anyị n'ihu ọha na Ederede Edemede Edemede maka iwebata anyi na ngwa oru a di itunanya!
Nọrọ Lekwasị Anya
5. Okwu 750
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 500 puku ndị ode akwụkwọ n’ụwa niile na-eji Okwu 750 eme ihe dị ka onye enyemaka ederede bara uru. Ejiri otu ebumnuche a mee naanị - iji nyere ndị na-ede blọgụ aka ịmụrụ mara edemede kwa ụbọchị. Dị nnọọ ka aha ya na-egosi, saịtị ahụ na-agba ndị okike ọdịnaya ume ka ha dee opekata mpe okwu 750 (ma ọ bụ peeji atọ) kwa ụbọchị. Ọ baghị uru ihe ị na-ede gbasara ya ma ọ bụrụhaala na ị na-eme ya oge niile. Ihe mgbaru ọsọ doro anya: ederede ụbọchị ga-abịakwute gị na akpaghị aka mgbe obere oge gachara.
6. Rush My edemede
Ide ederede blọgụ siri ike, mana ide edemede agụmakwụkwọ dị elu bụkarịrị ihe ịma aka. Nke a bụ ihe kpatara ụfọdụ ndị ode akwụkwọ ji eji Rushmyessay, ụlọ ọrụ na-eji ọtụtụ ndị ode akwụkwọ nwere ahụmahụ arụ ọrụ niile.
Craig Fowler, onye isi na Nlekọta Ọrụ UK, na-ekwu na Rushmyessay na-ejikarị ndị nkuzi nwere Master ma ọ bụ PhD na-ekwe nkwa nnyefe ọsọ ọsọ na ogo kachasị elu. Ọbụna ihe na-adọrọ mmasị karị bụ na Rushmyessay na-enye ndị ahịa 24/7 nkwado ndị ahịa, yabụ ị nwere ike izipu ozi ma ọ bụ kpọọ ha oku mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Rush edemede m
7. Nnyocha Enwe
Ihe kacha mma na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị, yabụ ha na-akpali ndị ọrụ ịme ihe site na ịjụ ajụjụ ma ọ bụ hapụ azịza. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka isiokwu nwee mmekọrịta mmekọrịta, ị kwesịrị iji Survey Monkey mee ihe. Ọ bụ onye na-ese ihe nyocha dị mfe na-enye gị ohere ịmepụta ma bipụta ntuli aka nke ntanetị n'ịntanetị n'ime nkeji. N'ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịhapụ ndị na-eso ụzọ gị ka ha kpebie ihe dị mkpa yana ọbụlagodi iji ya dị ka isi iyi nke mmụọ nsọ maka akwụkwọ ozi n'ọdịnihu.
Mbipụta ederede n’eteghị edezi abụghị ezigbo echiche. Have ga-enyocha obere obere ederede iji jide n'aka na enweghị mmejọ ma ọ bụ ụtọ asụsụ. Agbanyeghị, nke a nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka gị mee ya, yabụ anyị na-atụ aro ka ị jiri ya Grammarly. Ngwa mgbakwunye ngagharị na-ewu ewu nwere ike ịlele niile posts n'ime sekọnd ma gosipụta njehie, ederede dị mgbagwoju anya, na ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ na-eme ka ọdịnaya gị ezughị oke.
9. Ndị Ngwuputa Ggrade
Y’oburu n’achoghi igwe gha eghoghari ederede gi, odi uzo ozo di mfe. Ọ na-abịa n'ụdị GgradeMiners, ụlọ ọrụ na-ede ederede na edezi ya na ọtụtụ ndị editọ nwere ọgụgụ isi. Naanị ịkwesịrị ịkpọ ha ma ha ga-ekenye gị onye njikwa akaụntụ ngwa ngwa nke na-eweghara ikpe ahụ. Iji ọrụ a, ị gaghị atụ anya ihe ọ bụla na-erughị izuzi zuru oke na ịke mara mma.
Ndị na-egwuputa Cgrade
Onye na-achọ Cliché
Ngwaọrụ ikpeazụ na ndepụta anyị bụ n'ezie otu n'ime ihe kachasị adọrọ mmasị. Cliché Finder na-enyere ndị edemede aka ịkọwa ọdịnaya ha site n’ịkọwapụta na ịkọwapụta okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ndị a na-ejibu eme ihe. Imirikiti ndị mmadụ anaghị etinye uche na nsogbu a, mana ọ ga-eju gị anya ịhụ ọtụtụ clichés dị na ntanetị n'ịntanetị. Dịka onye edemede siri ike, ịchọghị ka nke a mee gị, yabụ jiri Cliché Finder kpochapụ iyi egwu ahụ.
Ndị na - ede blọgụ kachasị mma abụghị naanị ndị nwere ọgụgụ isi na ndị okike kamakwa ha na-aga nke ọma n'iji ngwa ederede na ntanetị. Nke a na-enyere ndị ode akwụkwọ aka ịde ngwa ngwa ma mepụta ederede ka mma kwa izu, nke bụ nkenke nkwekọrịta iji bụrụ onye nrụpụta ọdịnaya dị elu.
Anyị gosiri gị ndepụta nke 10 ịtụnanya ọdịnaya ederede ngwaọrụ nwere ike inyere gị aka imelite ọrụ ahịa gị. Gbalia lee ha anya ma dee a okwu ma oburu n’inwere aro ndi ozo n’eme ka kenye anyi!
ngosi: Martech Zone na-eji njikọ njikọta ya maka Grammarly n'isiokwu a.
Tags: blog isiokwu generatorakpati ozurush my edemedeederede ederede
Nzuzo Azụmaahịa Salon: Atụmatụ Ahịa Ahịa nke Akara 10 nwere ike inyere gị aka inwetakwu ndị ahịa